Ngwá ụlọ na-emepụta igwe & igwe ndị na-ebunye igwe | Shannegrui
Ngwaahịa Shangrui, nhọrọ dị elu, In-ENETA | Shangrui Secry bụ ọgbụgba osisi ọkachamara ọkachamara, arịa ụlọ na-eweta akụrụngwa
Mkpokọta Mgbakọ etiti
Ewelite ikpo okwu
Ngwaọrụ Mill Igwe
Ọrụ Ahaziri Aha
You ka na-echegbu onwe gị na ịchọtachaghị akụrụngwa zuru oke maka ụlọ ọrụ na arịa osisi siri ike?
Shangrui Fiell na-enye gị ahụmịhe ọrụ dị iche. Anyị na-emeziwanye teknụzụ anyị mgbe niile ma mee ka ngwaahịa anyị nke ọma ka ị wee nwee ike iji igwe na-eme ka mma. Maka gị igwu egwu na arịa ụlọ ọrụ ọkachamara. Igwe anyị (dịka igwe a pịa) nwere ike ịme ka edo, desks, akwa akwa, tebụl nri maka gị. Ọ bụrụhaala na ị nwere mkpa, anyị nwere ndị injinia ọkachamara iji dozie ha maka gị.
Shangrui igwe eji emepụta ọrụ dịgasị iche iche nke ngwa ọrụ na akụrụngwa osisi na-emepụta nri, dị ka mkpa dị iche iche nke ndị ahịa na mmepụta nke na-abụghị ọkọlọtọ.
Akụkụ anọ ndị ọkachamara na-ahụ msj3315x50
Shangruti igwe anọ, LTD. Ọkacha anya na-ahụ Msj3315x50 Ndị na-emepụta ihe dịgasị iche iche na akụrụngwa dị iche iche na-eme atụmatụ na nrụpụta nke na-abụghị ọkọlọtọ.
Ngwa igwe na-ekpo ọkụ dabara adaba maka ụlọ ọrụ ma ọ bụ obere ụlọ ọrụ
Kwesịrị ekwesị maka ụlọ ọrụ ma ọ bụ obere ụlọ ọrụ na-eme ihe na-eme ihe, na-ekpo ọkụ, na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na igbe dị n'ime: dị ka plywoodboard MDF, Melamine akwa akwa, bọọdụ oku, ọla kọm ígwè, keakamere na Micro nke osisi. enwere ike iji ya dị ka ihe na-egbu egbu, na-agbaze, osisi eji achọ mma
Otutu osisi na-acha odo odo na ngwaahịa Shangrui na ihe ọrụ
Otutu agụle hụrụ ngwaahịa na ihe ọrụ.
Ndị na-eji ngwa ọrụ na-ekpo ọkụ
Kwesịrị ekwesị maka ụlọ ọrụ ma ọ bụ obere ụlọ ọrụ na-eme ihe na-eme ihe, na-ekpo ọkụ, na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na igbe dị n'ime: dị ka plywoodboard MDF, Melamine akwa akwa, bọọdụ oku, ọla kọm ígwè, keakamere na Micro nke osisi. Ọzọkwa enwere ike iji ya dị ka vener nkụ na-egbuke egbuke, na-ebuli ya, ọnọdụ dị mma.
Oru Press Press omenala eji eme ihe na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ
POST POT: Ejiri ya na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ osisi, ihe mkpuchi mgbidi, ihe mpụga ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ, na-enweghị isi. Mee ya na usoro nke gluu, ọ dịghị mfe ịmepụtaNjọ na Degumming. A na-ejikarị ya n'ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, mmanụ a honeyụ, nkebi, mejupụtara, mgbe mkpuchi gluu.Press oyi dị mfe iji rụọ ọrụ ma dịkwa mfe iji. All igwe ojii na-eme ka ọwa ígwè na akwa nchara ma na-emegharị ya niile. Ihe owuwu a siri ike. Cylinder mmanụ na-akpọsaIke siri ike, na-egbu egbu, Chrome na-enye, ike kwụsiri ike, ọ dịghị mfe imebi. A na-eme panel a na-eme nke aluminom. N'oge njem dị ogologo, a na-eme nke aluminomAgaghị enwe nsogbu. Pọpick Press nke ụlọ ọrụ anyị mepụtarala asambodo nke ngalaba ma re ere nke ọma na ahịa ụlọ na ndị ọzọ. Shangrui serry,Ọ bụ naanị nhọrọ gị na akara nke akụ na ụba.
Ibufu ego na-ewulite ọrụ dị iche iche
A na-ejikarị ikpo okwu na-ebugharị maka ọrụ dị iche iche. Ọ nwere ngwa Wurring nke na-ebuli elu na azụ na-eweghachi, ma enwere ike iji ya na-eche onwe ha iji kwado njikwa ihe nhazi. Belata nnukwu ọrụ ọrụIbu ibu, weta ihe dị mma n'ibu ọrụ. Ọ dị mma maka mmepụta ọrụ dị iche iche. Ọ bụ ngwá ọrụ inyeaka dị mkpa maka nnukwu ụlọ ọrụ.
Azụmahịa tebụl ahaziri na SITE STIMMing
Ohere tebụl ahaziri ahazi na-achọ ka igwe na-ebelata.